Vaovao - Vocus mameno ny Darwin-Jakarta-Singapore Cable amin'ny rohy farany ambany any ambanin'ny ranomasina
Vocus dia mamita ny Darwin-Jakarta-Singapore Cable amin'ny rohy farany ambany any ambanin'ny ranomasina
Nilaza ny manampahaizana manokana momba ny fibre any Aostralia fa ny fifandraisana vaovao dia hampiorina an'i Darwin, renivohitra Avaratry ny Avaratra, ho "fidirana vaovao farany ho an'ny fifandraisana data iraisam-pirenena"
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nanambara i Vocus fa nanao sonia fifanarahana hananganana ny tapany farany amin'ny Darwin-Jakarta-Singapore Cable (DJSC) nandrasana hatry ny ela, rafitra mpamatsy vola $ 500 tapitrisa mampifandray an'i Perth, Darwin, Port Hedland, Christmas Island, Jakarta, sy Singapaoro.
Amin'ireto fifanarahana farany fanamboarana farany ireto, mitentina AU $ 100 tapitrisa, Vocus dia mamatsy vola ny famoronana tariby 1.000km mampifandray ny Australia Singapore Cable (ASC) misy ny North West Cable System (NWCS) ao Port Hedland. Amin'izany dia mamorona ny DJSC i Vocus, manome an'i Darwin ny fifandraisana tariby sambo iraisam-pirenena voalohany.
Ny ASC dia mitentina 4.600km ankehitriny, mampitohy an'i Perth any amin'ny morontsiraka andrefan'i Australia mankany Singapore. Ny NWCA, mandritra izany fotoana izany, dia mitanjozotra 2.100km andrefan'ny Darwin manaraka ny morontsiraka avaratra andrefan'i Aostralia alohan'ny hidirany ao Port Hedland. Avy eto no hifandraisan'ny rohy vaovao Vocus amin'ny ASC.
Noho izany, rehefa vita, ny DJSC dia hampifandray an'i Perth, Darwin, Port Hedland, Christmas Island, Indonesia, ary Singapore, manome 40Tbps ny fahaiza-manao.
Ny tariby dia antenaina fa ho vonona amin'ny serivisy amin'ny tapaky ny 2023.
"Ny tariby Darwin-Jakarta-Singapour dia mariky ny fahatokisana ny Top End amin'ny maha-mpamatsy iraisam-pirenena ny fifandraisana sy ny indostria niomerika," hoy ny Lehiben'ny faritra ao amin'ny faritra avaratry Michael Gunner. “Ity dia manamafy an'i Darwin ho toekarena nomerika mandroso indrindra any Avaratra Aostralia, ary hanokatra varavarana ny fahafaha-manao vaovao ho an'ny famokarana mandroso, foibe angon-drakitra ary serivisy fanaovana informatika miorina amin'ny rahona ho an'ny Teritorianina sy ny mpampiasa vola.”
Saingy tsy eo amin'ny sehatry ny tariby ambanin'ny ranomasina ihany no iasan'i Vocus hanatsarana ny fifandraisana amin'ny faritra avaratry ny Avaratra, izay nanamarihana fa vao tsy ela akory izay dia nahavita ny tetikasa 'Terabit Territory' miaraka amin'ny governemanta federaly any an-toerana, izay manaparitaka teknolojia 200Gbps ao amin'ny tambajotran'ny fibre eo an-toerana.
“Navoaka ny Terabit Teritory izahay - fampitomboana avo 25 heny ny fahafaha-manao ao Darwin. Nandefa tariby an-dranomasina avy any Darwin nankany amin'ireo Nosy Tiwi izahay. Mandroso ny Project Horizon izahay - fifandraisana vaovao misy 2.000km avy any Perth mankany Port Hedland ary mankany Darwin. Ary androany izahay dia nanambara ny Darwin-Jakarta-Singapore Cable, ny fifandraisana voalohany any anaty rano any anaty ranomasina any Darwin, ”hoy ny talen'ny talen'ny Vocus Group, Kevin Russell. "Tsy misy mpandraharaha fifandraisan-davitra hafa manakaiky io haavon'ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa fibra avo lenta io."
Ireo zotram-pifandraisana avy any Adelaide mankany Darwin mankany Brisbane dia nahazo ny fanavaozana ho 200Gpbs, miaraka amin'ny Vocus nanamarika fa havaozina indray izy io ho 400Gbps rehefa lasa ara-barotra ny teknolojia.
Vocus tenany dia nahazo azy tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) ary ny tahiry superannuation Aware Super ho an'ny AU $ 3,5 miliara Tamin'ny volana Jona.